Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) Oo Mudo Hal Sano Gudahood Ah Noqotay Shirkadda Ugu Macaamiisha Badan Magaalada Kigali Ee Wadanka Rwanda – Codka Qaranka Tanadland
Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) Oo Mudo Hal Sano Gudahood Ah Noqotay Shirkadda Ugu Macaamiisha Badan Magaalada Kigali Ee Wadanka Rwanda
Sawirka Gabar Reer Tanadland Ah Oo Maamulka Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) Ah Iyo Wakiilka Shirkadda (Hexagon Ragasco).
(Xarunta Ganacsiga Shirkadda (Mustaqbal Express) Ee Magaalada Kigali)
Magaalada Kigali ee wadanka Rwanda waxaa ku nool soomaali farabadan, walow cadadka soomaalida ku nool wadanka Rwanda ay aad uga yaryihiin soomaalida ku nool wadamada Kenya, Tanzania iyo Uganda. Waayadii hore intaanu wadanka Ruwanda uusan ka dhicin dagaalka sokeeye, meheradda dadka soomaaliyeed ee ku nool wadanka Ruwanda waxay u badnayd gaadiidley. Laakiin marka hada ah wadanka Ruwanda waxay ganacsatada Soomaalidu ay ku leedahay ganacsi xoog leh.
(Sawir Muujinaya Sida Uu U Fududyahay Gaaska Amaanka Ah Ee “Safe Gas”.
Sababtuna waxa weeye wadanka Rwanda Soomaalidu waxay ka heleen fursad dahabi ah oo la mid ah midii koonfurta Suudaan ay ka heleen. Dadka koonfurta suudaana waxay soomaalida ay ku qabeen faa’iido ka weyn mida ay soomaalidu ku qabeen. Taasoo ah in ganacsatada soomaalidu ay qalabka dhismaha oo dhan iyo badeecado daruuri ah ay iyaga oo kali ahi ay wadanka keenijireen. Arinta dad badani aysan ogeyn waxa weeye xataa markii koonfurta suudaan lagu kala yaacay oo ay soomaalidii ka qaxday. Dagaalka xumina uu ka dhacay oo u wadanku kala qaybsamay. Waxaa dhacday in qolada dowlada ah ee wadanka nus haysata, ay ganacsatada Soomaalida magaalada Dubai ay ugu tageen oo ay u balan qaadeen in hadii ay wadanka ku soo noqdaan ay dowladdu hantidooda damaanad qaadayso.
Marka wadanka Ruwanda ganacsatada Soomaalidu waxay ka heleen fursado badan oo aysan ka helayn meel kale. Tusaale ahaan, sarifka lacagaha wadamada bariga afrika caasimadahooda tartan isfalisaad ah oo aad u xoogbadan ayaa ka jira. Oo waxy leeyihiin ilaa 50 meeyo xafiis oo lacagaha sarifa. Laakiin magaalada Kigali shirkadaha lacagaha sarifa 10 ma’ay dhama.
Shirkaddaha Soomaalida shirkaddii ugu horeysey oo hanti farabadan oo isugu jirta dhismeyaal degaan ah iyo xarumo ganacsi magaalada Kigali ka samaysay, waxay ahayd shirkadda (Mustaqbal Group). Shirkadda (Mustaqbal Express) waxay ka mid tahay shirkaddaha soomaalida ee dhismeyaasha ganacsi oo ugu badan ku leh dalka iyo dibeddaba. Sidoo kale shirkadda (Mustaqbal Express) waxay uga duwantahay shirkadaha kale ee lacagaha xawila. Shirkadda (Mustaqbal Express) waa shirkadda ugu weyn shirkaddaha soomaalida ee ka ganacsada sarifka lacagaha. Shirkadda (Mustaqbal Express) soomaaliya iyo dunida inteeda kale si la mid ah, ayey wadanka Rwanda ugu leedahay xafiisyo lacagaha sarifa “Forex Bureau”.
Imaatinkii Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) Ee Magaalada Kigali :-
Sidaan horay idiinku sheegay shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) hadafkeeda koobaad waxa weeye, inay noqoto shirkadda ugu balaaran ee gaaska ka ganacsada wadamadada bariga afrika. Waxayna shirkaddu ku socotaa kaynaan la yaab leh oo karaar dhaafay. Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) waxaa dhidibada loo taagey taariikhdu markii ay ahayd (27/08/2012). Waxaana faracii ugu horeeyey ee shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) laga furay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya. Wadankii labaad oo shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) ay xarun ganacsi ka furatana wuxuu ahaa wadanka Rwanda.Dalka Rwanda xarunta shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) waxaa lagafuray magaalada Kigali ee wadanka Rwanda taariikhdu markii ay ahayd (16/02/2015).
Hanaanka Ay Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) Ku Qabsatay Suuqa Magaalada Kigali
Soomaalida kenya ku nooli weli waxay la dhakafaarsanyihiin sida deg-dega ah ee ay ku qabsatay shirkadda (Safe Energy Kenya Limited), suuqa ugu weyn ee wadamada bariga afrika. Laakiin taas waxaa ka daran sida ay ula yaabanyihiin soomaalida ku nool wadanka Rwanda, xawaaraha ay ku qabsatay shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) suuqa magaalada Kigali. Suuqa gaaska ee wadamada bariga afrika ku yaala, Suuqa dalka Rwanda waxaa la orankaraa marka laga reebo wadamada Jabuuti iyo Burundi, waa suuqa sadexaad ee ugu yar. Shirkaddo macno leh oo gaaska ka ganacsadaana ma’ay jiraan. Wadanka Rwanda waxaa gaaska keena 3 shirkaddood oo ay ganacsato Soomaali ahi ay leeyihiin, iyo shirkaddo reer galbeedku ay leeyihiin oo xayn ah. Laakiin intii ka horeysey sanadkii 2015 -ka, shirkaddaha gaaska la shito ee wadanka Rwanda tafaariiqda u gada ee ugu waaweyn waxay ahaayeen 5 shirkaddood. Oo kala ah (Kobil Gas), (Lake Gas), (SP Gas), (Sulfo Gas), Iyo (Merez Gas). Kuligoodna waa shirkaddo ay leeyihiin ganacsato Rwandeys ah.
Bilowgii sanadkii 2015 shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) magaalada Kigali ayey ka hirgelisey xarun gaaska (Save Gas) lagu shub-shubo. Waxay kaloo laamo ka furatay xaafadaha magaalada Kigali. Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) sida shirkadda (Hass Petroleum (K) Ltd) ma’ay laha gaadiid shidaalka qaada oo waaweyn. Sida aan war ku helayna shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) kuma ay talajirto inay gadiid shidaalka qaada ay la soo degto. Marxaladda xun ee haysata shirkaddaha gaadiidka ee reer Tanadland ee dalka Kenya darteed. Marka qandaraasyada rarka gaaska shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) waxay siisay, Shirkadda xamuulka ee ugu weyn oo ay soomaalidu ku leedahay Bariga Afrika ee (Tanad Transporters Ltd -Kenya).
Meelmarinta Hadafka Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) :-
Wadanka Kenya shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) dad waxaa jira ku dhaliila qarashka farahabadan ee ay ku bixiyaan xayeesiimaha. Wadanka Rwanda qaasatan magaalada Kigali waxaa jira dad reer Tanadland ah oo aragtidaas mid la mid ah qaba. Sanadkii ina dhaafay ee 2015 -ka waxaa magaalada Kigali lagu qabtay bandhigii sanadlaha ahaa ee carwada dalka Rwanda. Shirkadaha carwada qaranka ee Rwanda damaanadqaaday, shirkadda qarashka ugu badan ku bixisay waxay ahayd shirkadda (Safe Energy Kenya Limited).Laakiin dad kaasi waxaysan fahansaneyn muhiimadda iidhehdu ay u leedahay shirkadda (Safe Energy Kenya Limited). Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) maadaam aysan wax soo saarin macaashkeedu wuxuu ku salaysanyahay, badeecad tayo iyo tiro leh. Marka kororka macaamiisheedu daqliga shirkadana waa u kobcinayaa. Sicirka mustaqbalka ay gaaska ku soo gadandoontana hoos ayuu u dhigayaa.
Rwanda Environment Management Agency (REMA) has urged the public to use gas instead of charcoal or firewood. Responding to the launch of Safe Gas, a new liquefied petroleum gas on the local market, Rose Mukankomeje, the Director General of REMA, says that the shift to use of gas would be vital in preserving the green nature for the next generation.
Mideeda kale shirkadda (Hexagon Ragasco) oo ah shirkadda samaysa haamaha lagu iibiyo gaaska (Safe Gas). Intii ay jirtey waxay labo warshadood ay ka hirgelisey dalka Norway iyo Maraykanka. Warshadda dalka Norway ku taala iyadaa iska leh. Warshadda wadanka Maraykanka ku taalana shirkad kale ayaa iska leh oo ay ka iibisey. Haamaha ugu badan oo wadanka Norway laga dhoofiyana waxaa gata shirkadda (Safe Energy Kenya Limited). Wadanka sadexaad oo warshad samaysa haamaha amaanka ah laga hirgeliyaana wuxuu noqondoonaa dalka Kenya. Marka shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) intaanay samayn warshad soo saaraysa maalintii boqolaal kun oo haamoot. Waa inay marka hore heshaa macaamiisha ugu badan ee ugu yaraan labo wadan, oo ku yaala bariga Afrika.